Maxaa keenay in uu is casilaad ku dhawaaqo Madaxweynihii Hir-Shabeelle | SMC
Home WARARKA MAANTA Maxaa keenay in uu is casilaad ku dhawaaqo Madaxweynihii Hir-Shabeelle
Maxaa keenay in uu is casilaad ku dhawaaqo Madaxweynihii Hir-Shabeelle
Madaxweynihii mudada xilheyntiisa ay dhamaatay ee Dowlad Goboleedka Hi-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa xalay Saqdii dhexe waxaa uu ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkii Madaxweynaha Maamulkaas.
Qoraal uu soo saaray Waare ayuu ku sheegay in, isaga oo tixraacayo qodobka 52aad ee Dastuurka KMG ah ee Hirshabeelle uu is casilay, xilli howlaha doorashooyinka Hir-Shabeelle ay si caadi ah uga socaan magaalada jowhar.
Maxamed Cabdi Waare ayaa qoraalkiis sidoo kale waxaa uu ku sheegay in uu dalabday in howlaha doorashooyinka Hir-Shabeelle dib loo dhigo muddo bil ah maadaama ay soo fool leeyihiin doorashooyinka Baarlamaanka Heer Federaal, balse taas bedelkeeda uu bilaawday is xulafeysi wax kala boobid iyo dano gaar ah.
Is casilaada uu ku dhawaaqay Madaxweynihii Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare oo mudada xilheyntiisa ay ku ekeed 26-kii Bishii la soo dhaafay ee Oktoober ayaa waxaa uu kusoo adayaa xilli howlaha doorashooyinka Hir-Shabeelle ay ka socdaan magaalada jowhar, isla markaana Maalinta Berito oo Arbaco ah la filayo in la doorto guddoonka Baarlamaanka Hir-Shabeelle.
Previous articleBeesha Dir oo War kasoo saartay Doorashada Soomaaliya (Maareeye & Feysal Waraabe oo ka wada qeyb galay..)
Next articleXadka Somalia & Kenya oo xiran & qeylo dhaan laga muujiyay